ISobantu S Stars kufanele inqobe nakanjani | News24
ISobantu S Stars kufanele inqobe nakanjani
“Manje njengoba sesibhekene ne-Ibisi nje kufanele noma kanjani sinqobe bese sithemba ukuth iMilford FC [okuyiyo esesicongweni] ayinqobi. Lokhu kuyokwenza ukuthi kudlulele thina kuma-play-offs.
“Thina njengeSobantu Shooting Stars sabe sikuphikisa lokhu ngoba sazikubona kungekuhle. Sabe sithi okungcono wonke umuntu akanikwe amaphuzu ayisithupha noma udlali noma akadlalanga nayo kodwa abaphathi beSafa banqaba,” usho kanje uRadebe.
IMaritzburg City kubikwa ukuthi ibuwuphethe umdlalo iziwombe zombili kanti igoli lokuqala lomdlala livalelwe phakathi uThobelani Msomi wayo iCity emzuzwini ka-63 esiwombeni sesibili.
Kuthe umdlalo usuya ngasemaphethelweni iShooting Stars yathola iphenathi